Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "anoda" kuti shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "anoda" kuti shamwari manzwiro?
vachishandisa kuti kuzvitaurira 3500 Yen vakasununguka zvaanoreva
nyanzvi kufembera ari neizvi nzvimbo "anoda" rine Marseille Shanduro uye uremu shanduro, kazhinji akajairwa vanokweverwa zvakadzama uremu shanduro anoda kadhi iri Testamende yekare Adhamu naEvha vari akava kweshoko. The siringi keji ndiye Mikaeri Ngirozi Huru, riri pasi wayo Kune kusimira varume nevakadzi.
murume anofanira kufadza rudo mukadzi yakarurama nokudhiraivha ari mukadzi, asi mukadzi chii anogona kugamuchira manzwiro evanhu, tinotarisira uye tinoda kunzwa chokwadi nokudhiraivha pane imwe ngirozi huru vari pasirin'i .
pasi mutsetse Ngirozi Huru haasi chinhu akati atendeuka sevasingaoni, asi nokuda zvipfeko minhenga matsvuku nezvishava, yakapirikirwa kutaura "Tenda manzwiro ako." Kureva anoda kadhi rave kurwa muedzo, chinomirira anovimba neni, hasha, kuroorana uye zvakafanana. Kana wasvikapo
anokumhan'arira kuti kunzwa zvakanaka nzvimbo anoda izvozvo zvinofanirwa kureva
anoda kadhi iri zvakarurama nzvimbo, uri mukana kukwanisa kusarudza kusarudza uye yakarurama mugumisiro. Chipfeko Ngirozi Huru minhenga matsvuku nomutsvuku rinomiririra wakachena manzwiro uye yakarurama rudo, ngirozi huru kuti mutevere akatendeseka nemanzwiro ako vadikamwi, uye kuda, anoudza kukosha kuvimba kuti . Vanhu vose Ndinofunga sokuti kukoshesa nguva yaunopedza nomumwe wenyu zvino.
muchato, etc. pane zvakananga kufunga maviri vanhu ramangwana, une zvinhu zvakasiyana siyana ndinoda kunakidzwa vanhu vaviri vokutanga. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo anokumhan'arira iwe vangafarira mamuri. Zvinoita sokuti vari tariro kuti tipedze kunonakidza nguva Pashure kuenda nemi.
unofanira kuratidza zvakajeka chinangwa kuna anokumhan'arira, zvakawanda anokumhan'arira kwatiri kuti tinzwe vakufarire, kunoitawo kuti zvive nyore vawanda nezwi. Kana isu pedyo naMwari vakatendeseka manzwiro, vako akatendeseka Zvinokurudzirwa saka iwe wakagamuchira zvakanaka zvakaipa.
Kana mumwe bato manzwiro
anoda kadhi iri neizvi nzvimbo Vanzveri kureva anoda akabuda ari neizvi nzvimbo haangavi aireva kuti hapana zvimwe zvabuda, sezvo ndinofunga iri runopoterera . Kana vaviri ndinofunga vanhu, mumwe bato sokuti kunzwa zvakawanda kana zvishoma mutoro ukama newe. Mumwe bato rine zvikamu kuti ini kunyange kuda kubvisa ukama newe. Kana
kana pane ndinofunga ndinoda kuramba ukama hwako, kuti kana kutaura mamwe bato iri vanetsane kubva kukangaidzika mupikisi. Ndapota kuva pano kupa yokurinda zvinyoronyoro anokumhan'arira uye kushivirira. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo hachiratidzi kuti mubereko zvakawanda pamusoro pako. Nokuti kutarisa penyu kunzwa kuti mumwe shamwari yechisikana dzakawanda, Chokutanga, ndapota tarisa hwakadii seshamwari.